Garaad Cali Aadan Diini – Isimka Cusub Ee Tanade Bari – Codka Qaranka Tanadland
Garaad Cali Aadan Diini – Isimka Cusub Ee Tanade Bari
[Sawirka Garaad Cali Aadan Diini oo ah garaadka beesha (Reer Khayr) ee gobolka bari]. Gobalka (Bari) waxaa wada dega beelo badan oo ka kooban Dir, Daarood iyo beelo xayn ah oo soomaalida kale ah. Waxayna kala yihiin, 1. (Dhebayaco), 2. (Tanade), 3.(Dishiishe), 4 (Jaaji), 5. (Warsangeli), 6. (Reer Waa Rag), 7. (Jambeel), 8. (Tumaal), 9. (Dir), 10. (Qabsandulle), 11. (Leg Dhifso), 12. (Shalaan Degey). Labada beelood ee (Suhure Tanade) iyo (Reer Khayr) waxay degaan cirif ka cirif gobolka bari Banderbayla ilaa xaafuun iyo inta u dhexaysa. Beesha beelaha reer Tanadland ugu shishaysaana waa beesha (Suhure Tanade), oo degta magaalada (Xaafuun) ilaa magaalada (Eyl). Labadaas beelood mudo dheer waxay ahaayeen qawmiyadda labaad ee ugu degaamada badan gobolka bari. Saas oo ay tahay caasimadda gobalka bari ee magaalada Bosaso, intii ka horeysey 1991 sida reer Tanadland ay ugu badnaayeen gobolka intiisa kale ugama aysan muuqan. Magaalada (Bosaso) intii ka horeysey 1991-gii sadexda beelood ee magaalada bosaso ugu badani waxay kala ahaayeen, (Dishiishe), (Dhebayaco) iyo (Warsangeli). Arintaasna waxaa u sabab ahaa labo arimood.
1) Intii ka horeysey sanadkii 1991 -kii oo ay magaalada bosaso ahayd magaalo aad u yar oo aan lahayn wax loogu xisho.
2) Beelaha (Suxure Tanade) iyo (Reer Khayr) gaar ahaan (Maxamuud Cali) oo doomo badan lahaanjirey, waxna ka dhoofsanjirey kalana soo degijirey dekedaha dabiiciga ah ee degaamadooda.
Balse intii ka danbeysey 1991-gii dadka reer Tanadland waxay noqdeen qawmiyadda sadexaad ee ugu badan dadka degan magaalada Bosaso. Dhanka ganacsiga magaaladana guud ahaan waxaa la orankaraa waa kaalinta labaad dhanka tirada. Walow marka ay noqoto ganacsiyada waaweyn sida, (Wershadaha), (Shirkaddaha Isgaarsiinta) iyo (Bangiyada) mulkiyaddooda ganacsatada reer Tanadland ay kaalinta kowwaad ku jiraan. Beelweynta (Maxamuud Cali) waxaa mudo dheer lagu dhaliilijirey sababta ay isim weyn ugu yeelanwaayeen gobolka bari, walow ay sabab uga dhigijireen xurmayn ay xurmaynayaan saldanadda beesha (Suhure Tanade). Beeshaas oo ah beel duud sare ah oo waalid u ah in si gaar ah loo xurmeeyana mudan.
Taariikhdu markii ay ahayd (10/03/2014) waxaa magaalada bosaso lagu caleemasaaray (Garaad Cali Aadan Diini).Gobalka (Bari) waxaa wada dega beelo badan oo ka kooban Dir, Daarood iyo beelo xayn ah oo soomaalida kale ah. Waxayna kala yihiin,
1. (Dhebayaco), 2. (Tanade), 3.(Dishiishe), 4 (Jaaji), 5. (Warsangeli), 6. (Reer Waa Rag), 7. (Jambeel), 8. (Tumaal), 9. (Dir), 10. (Qabsandulle), 11. (Leg Dhifso), 12. (Shalaan Degey).
Labada beelood ee (Suhure Tanade) iyo (Reer Khayr) waxay degaan cirif ka cirif gobolka bari. Magaalada (Banderbayla) ilaa magaalada (Xaafuun) iyo inta u dhexaysa. Beesha beelaha reer Tanadland ugu shishaysaana waa beesha (Suhure Tanade), oo degta magaalada (Xaafuun) ilaa magaalada (Eyl). Mudo dheer labadaas beelood waxay ahaayeen qawmiyadda labaad ee ugu degaamada badan gobolka bari. Saas oo ay tahay caasimadda gobalka bari ee magaalada Bosaso, intii ka horeysey 1991 sida reer Tanadland ay ugu badnaayeen gobolka intiisa kale ugama aysan muuqan.
Magaalada (Bosaso) intii ka horeysey 1991-gii sadexda beelood ee magaalada bosaso ugu badani waxay kala ahaayeen, (Dishiishe), (Dhebayaco) iyo (Warsangeli). Arintaasna waxaa u sabab ahaa labo arimood.
2) Beelaha (Suxure Tanade) iyo (Reer Khayr) gaar ahaan (Maxamuud Cali) oo doomo badan lahaa, waxna ka dhoofsanjirey kalana soo degijirey dekedaha dabiiciga ah ee degaamadooda.
Balse intii ka danbeysey 1991-gii dadka reer Tanadland waxay noqdeen qawmiyadda sadexaad ee ugu badan dadka degan magaalada Bosaso. Dhanka ganacsiga magaaladana guud ahaan waxaa la orankaraa waa kaalinta labaad. Walow marka ay noqoto ganacsiyada waaweyn sida, (Wershadaha), (Shirkaddaha Isgaarsiinta) iyo (Bangiyada) mulkiyaddooda kaalinta kowwaad ganacsatada reer Tanadland ay ku jiraan.
Beelweynta (Maxamuud Cali) waxaa mudo dheer lagu dhaliilijirey sababta ay isim weyn ugu yeelanwaayeen gobolka bari, walow ay sabab uga dhigijireen xurmayn ay xurmaynayaan saldanadda beesha (Suhure Tanade).
Beeshaas oo ah beel duud sare ah oo waalid u ah in si gaar ah loo xurmeeyana mudan.
Beelweynta (Maxamuud Cali) waa beesha ugu balaaran uguna deegaamada badan beelaha reer Tanadland ee daga gobolada Nugaal iyo Bari. Marka ay dhexdeeda abaabulantahayna reer Tanadland oo dhan ayey dan u tahay. Beesha (Maxamuud Cali) horay waxay u haysey xilka isimka guud ee beelaha reer Tanadland ee gobalka Nugaaleed. Xilkaas oo uu hayo (Suldaan Subeyr Xaaji Maxamuud Cali Abokor).
Isimka cusub ee lafaha beesha (Maxamuud Cali) ee gobalka bari dega ay caleemasaarteena wuxuu noqday (Garaad Cali Aadan Diini), oo ka soo jeeda qoys magac iyo maamuus balaaran ku dhex leh umadda reer Tanadland oo hormuud ah. Laakiin taas macnaheedu maaha in uu garaadku beeshiisa oo keliya isim u yahay.
(Suldaan Cabdiladiif Suldaan Nuux Suldaan “Cali Cad”] oo ah suldaanka beesha (Suhure Tanade), iyo (Garaad Cali Aadan Diini) waxay isimo guud ay u yihiin beelo dhawr ah oo reer Tanadland ah oo gobalka bari la dega. Sida (Suldaan Subeyr Xaaji Maxamuud Cali Abokor) uu isim guud ugu yahay beelaha reer Tanadland ee reer nugaaleed oo dhan.
Caleemasaarka (Garaad Cali Aadan Diini) iyo Muhiimadda Balaaran Ee Ay U Leedahay Umadda Reer Tanadland :-
Umadda reer Tanadland waa umad aad u balaaran oo bariga soomaaliya ka degta 3 gobol iyo 7 degmo. Waa umad soojireen ah oo taariikh iyo xadaarad aad u fac weyn leh. Tanadland waxay mudnayd inay waa hore yeelato dowladgoboleed. Balse nasiibdaro taasi weli ma aysan dhicin. Taas waxaa ka siidaran in reer Tanadland 5 xildhibaan oo keliya ay ku leeyihiin golaha baarlamaanka soomaaliya?. Taasoo ah arin fadeexad ah oo u baahan in la saxo. Arimahaas oo dhana waxaa u sabab ah abaabul la’aanta beelaha reer Tanadland. Si guud iyo si gaar ahaaneedba inay is’abaabulaan intii karaankood ah umadda reer Tanadland waa lamahuraan.
Isimka cusub ee ay dooratay beesha (MC -Bari) waxay ka tarjumeysaa baahida umadda Tanadland, khaasatan beesha (MC) ee gobalka bari oo loo baahnaa 700 oo sano ka hor in hogaandhaqameed ay yeelato. Ustaad (Garaad Cali Aadan Diini) waa nin indheergarad ah kana soo jeeda qoys caan ah oo hormuud u ah umadda reer Tanadland. Laf ahaana ka soo jeeda beesha (Reer Garaar) oo ay xaruntoodu tahay magaalada (Bandarbayla).
Isimka cusub ee ay beesha (MC) caleemasaaratay waa wax ilaah looga mahadsho, umadda karaamaysan ee reer Tanadland oo dhamina ay ku diirsadeen. Aniga oo taas ka duulaya kuna hadlaya codka wadaniga xalaasha ah ee umadda karaamaysan, waxaan hawada umarinayaa hambalyo iyo bogaadin isimka cusub ee beelaha reer Tanadland ee gobolka bari (Garaad Cali Aadan Diini).
Waxaana u rajeynayaa garaadka in uu rabi ka dhigo garaad garaadkiisa, taladiisa, tawfiiqdiisa, burjigiisa iyo waxqabadkiisa umadda karaamaysan ee reer Tanadland ay ku Tanaado. Aamiin!!, Aamiin!!, Aamiin!!, Allow noo idan idinkuna dhaha.